Sina Mpanamboatra sy mpamatsy kitapo mainty 12oz ara-barotra any China Zhihongda
Kitapo tsy tenona
Kitapo tsy voatenona D
Kitapo T-Shirt tsy tenona
Kitapo Tote tsy tenona tsy misy tenona
Kitapo Tote tsy voatenona voalamina
Kitapo tsy misy tenona vita amin'ny laser
Kitapo tady tsy tenona
Tote tsy misy tenona ultrasonic
Kitapo vita amin'ny landihazo
Kitapo vita amin'ny rongony vita amin'ny landihazo misy Gusset ambany
Kitapo vita amin'ny canvas vita amin'ny landihazo
Kitapo lamba rongony vita amin'ny landihazo
Tavy Canvas Cotton miaraka amin'i Gusset
Kitapo Zippera vita amin'ny lamba landihazo
Velcro Thermal Bag
Kitapo Thermal Zipper
Kitapo miantsena azo zahana
Fitaovana fanontana ambongadiny Wholesale China Advertising ...
Bolsa de Alimentos Zipper White Lunch Cooler Bag In ...
Bolsas De Regalo Long Handle Grocery Bag Colored Co ...
Kitapo fiantsenana marika tsy misy tenona an-tsokosoko
Zipper namboarina azo aforitra tsy tenona miendrika lamba miendrika akanjo ...
Zipper Pink Blue Nonwoven Thermal Bag Take Out Seafo ...
Canvas kitapo fonosana paosy landihazo landihazo b ...
Sary manokana miloko marevaka Eco mainty mitambatra ...
Natao ho an'ny namboarina manokana vita amin'ny landihazo landihazo canv ...
Kitapo fehin-kibo miloko vita amin'ny landy tsy misy fangarony ...
Kitapo fehin-tànana miendrika tontolo iainana landihazo fanomezana kitapo Drawstri ...
Kitapo manokana Drawstring kitapo fitehirizana fanomezana voajanahary dra ...
Fiantsenana voajanahary voajanahary azo ampiasaina 100% ...
12oz Heavy Travel Eco Travel Bags Inside Brand Label G ...
Tote Bag Tote 100% vita amin'ny landihazo vita amin'ny landihazo miaraka amin'i Guss ...
Fonosana fividianana kitapo miantsena lehibe azo ampiasaina indray miaraka amin'ny ...
Fividianana fivarotana enta-mavesatra ara-tontolo iainana 100% canvas tot ...
Logo-Print Organic Cotton Canvas Fabric Blank Tote B ...
Kitapo fivarotana canvas mainty 12oz mora vidy
1. FAHASALAMANA LEHIBE: Ireo kitapo mavesatra be ireto dia lehibe ary hitazona fivarotana enta-mavesatra, hamonjy fotoana sy vola. Ny habe namboarina dia azo ekena
2. ANDRIAMANITRA MAHASOA: Ny fehikibo dia nozazaina hatrany aloha sy miverina ho mateza fanampiny raha mitondra entana mavesatra na mahazatra. Mihoatra ny soroka lava sorony ataovy mora entina ny entanao,
3.CREATE DESIGNS tsy manam-paharoa: Tsara amin'ny fandokoana na fandokoana ny volanao manokana.
4.MULTI-USE: Ireo kitapo ireo dia tsara ho an'ny fivarotana, ny morontsiraka, ny pisinina, ny fitsangatsanganana, ny fitsangatsanganana na toy ny tote isan'andro.
5.BIODEGRADABLE: Ireto kitapo ireto dia azo ovaina ary safidy tsara hanariana kitapo plastika.
Anaran-javatra Kitapo fivarotana canvas mainty 12oz mora vidy
Fampiasana Fiantsenana, fanomezana fampiroboroboana, fonosana, kitapo lamba sns.
ara-nofo Lamba landihazo 100% landihazo, 4-20oz, 100gsm-570gsm, 6oz (175gsm), 8oz (230gsm), 10oz (280gsm), 12oz (340gsm)
Size 10x15cm, 15x21cm, 20x25cm 25x30m 30x35cm 35x40cm na habe namboarina.
Loko Loko voajanahary, fotsy, mainty na namboarina arakaraka ny angatahinao.
fanakatonana Tady landihazo, tady miolakolaka, sns.
manamboatra fisaka, ambany toradroa, ambany boribory, ambany kianja ary gusset
FAMANTARANA Sary namboarina
OEM & ODM Manaiky tokoa izahay!
pirinty natao tamin'ny fanontana lamba vita amin'ny landy, fanaovana pirinty amin'ny foil ary fanontana hafanana, fanontam-pirinty fanonerana hafanana, fanontana nomerika sns.
Mamokatra fotoana 15-25 andro, arakaraka ny habetsanao.
Fonosana 200 pcs / baoritra, na mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa
Fomba fandefasana an-dranomasina, amin'ny rivotra, amin'ny express
Santionany 1). fotoana fakan-tahaka: Ao anatin'ny 3-5 andro.
2). Fiampangana santionany: Araka ny antsipirian'ny vokatra.
3). Famerenam-bola santionany: eny rehefa be
4). Fanaterana santionany: UPS, FedEx, DHL,
5). Maimaimpoana ny santionan'ny tahirinay, saingy mila mandoa ny entam-barotra ianao
Fe-potoana fandoavana 30% petra-bola amin'ny T / T mialoha, 70% mandanjalanja amin'ny T / T alohan'ny fandefasana
L / C, D / A, D / P, Western Union, Paypal, Visa, Card debit, carte de crédit
Seranan-tsambo FOB Chengdu na Shanghai.
Fanontana silkscreen: ampiharo amin'ny endrika izay tsy dia misy loko firy.
Fanaovana pirinty hafanana: apetaho amin'ny endrika izay manarona kely sy misy loko maro.
Fanontana nomerika: ampiharo amin'ny endrika izay mandrakotra lehibe sy misy loko maro.
Azafady mba lazao anay ny zavatra takianay amin'ny fanontam-pirinty na alefaso aminay ny kanto famolavolana, dia hatolotray anao ny fomba fanontana mety indrindra aminao.
Safidio ny hateviny
Matetika izahay dia mampiasa fitaovana 6oz (175gsm), 8oz (230gsm), 10oz (280gsm), 12oz (340gsm) hanamboarana kitapo lamba rongony. Afaka misafidy fitaovana matevina hafa tianao ianao. Afaka manome fahafaham-po ny fangatahanao rehetra izahay.
Afaka misafidy ny loko ianao. Manome fitaovana lamba rongony amin'ny loko isan-karazany izahay. Matetika, ara-dalàna ny loko voajanahary. Azafady mba lazao anay izay loko tadiavinao.
Afaka manao karazana kitapo rongony landihazo maro isika. Raha manana endrika ianao dia tsara kokoa izany. Raha tsy manana endrika na hevitra ianao dia tsy maninona izany. Manana traikefa betsaka amin'ny famokarana kitapo rongony landihazo izahay ary afaka manome sosokevitra vitsivitsy ho anao.
Fomba bebe kokoa
Kitapo landihazo / lamba rongony
Kitapo mangatsiaka vita amin'ny insulated
Kitapo misy tady
Kitapo trolley misy kodiarana
Kitapo kosmetika Kitapo fanasana
1. F: Azoko atao ve ny manamboatra ny kitapoko?
A: Afaka manao ny kitapo mifanaraka amin'ny zavatra takinao izahay.
2. F: Azoko atao ve ny manonta ny sary famantarana anay amin'ny vokatrao.
A: Eny, azonay atao pirinty ny sary famantarana amin'ny vokatrao. Izahay ihany no mila manome ny rakitrao amin'ny endrika PDF na endrika AI.
3. F: Ohatrinona ny vokatra?
A: Ny vidiny dia voafaritry ny anton-javatra maro toy ny material, style, size ary sns. Raha lazainao amiko ny zavatra takiana amin'ny vokatra manokana dia afaka manome ny vidiny tsara indrindra ho anao izahay.
4. F: Inona ny ora famokarana?
A: 15-25 andro ara-dalàna, miankina amin'ny habetsany izany. Azafady mba lazao anay ny daty tadiavinao, afaka manandrana ny tsara indrindra izahay hanome fahafaham-po anao.
5. F: Azo atao ve ny maka santionany alohan'ny hametrahana baiko?
A: Eny, azo antoka, ho an'ny fanamarinana kalitao sy ara-pitaovana, ny santionan'ny tahiry tsy misy fanontana namboarina dia azo omena malalaka amin'ny kaonty mpampita hafatrao. Faly izahay mandefa anao santionany maimaim-poana.
6. F: Hafiriana no ilaina amin'ny ora famokarana santionany?
A: 1 andro ho an'ny santionany efa misy. 3-5 andro ho an'ny namboarina santionany.
7. F: Ahoana no fandefasana ny kaomiko? Ho tonga ara-potoana ve ny kitapoko?
A: Miankina amin'ny sidina, amin'ny rivotra, na amin'ny alàlan'ny mpitatitra mivantana (UPS, FedEx, TNT) ny fotoana fivezivezena
8. F: Inona avy ireo fepetra momba ny fandoavam-bola?
A: fametrahana 30% T / T, fifandanjana 70% alohan'ny fanaterana.
30% T / T petra-bola, fifandanjana 70% amin'ny BL.
100% mialoha, L / C amin'ny fahitana, Western Union / Paypal ho an'ny fandoavam-bola kely.
9. F: Mba hahazoana teny nalaina, inona avy ireo antsipiriany ilaina holazaina amintsika?
A: Fitaovana, habe, fomba, loko, mombamomba ny fango, haben'ny logo, fehezan-teny pirinty, habetsahana ary zavatra ilaina rehetra.
Teo aloha: Kitapo miverina kitapo lamba rongony vita amin'ny lamba landy miaraka amin'ny mpamatsy fampiroboroboana logo
Manaraka: OEM banga ampanjifaina ny kitapo fividianana lamba rongony landihazo tote kitapo
Sublimation Print Eco Organic voajanahary lemaka afaka ...
Sina mpamatsy lamba canvas tote kitapo fanontana moron-dranomasina b ...
Kitapo vita amin'ny laoniny vita amin'ny laoniny vita amin'ny lamba miverina ...
Fampiroboroboana Logo manokana narahina Eco-friendly El ...
Logo voajanahary banga voajanahary vita pirinty eco-friendly ...
White Black Blank Natural Canvas Fabric Shoppin ...
Telefaona: 0086 15184479681